5 Umthandazo wokuPhumelela kunye nobutyebi bezeMali: 7 ukuya kwiintsuku ze-21
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wempumelelo
Ngaba wakha waba naloo mzuzu xa ucinga ukuba ithamsanqa alikho nje kwicala lakho kwaye awusoze ube nemali? Awungomntu wokuqala ukudlula kule nto, kodwa unokuba ngomnye wabo batshintsha ubomi bakho Umthandazo wempumelelo iintsuku ezisi-7, iintsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-30.
Sazi kakuhle ukuba imali idlala indima ebaluleke kakhulu kubomi bethu. Siyifuna ukuze siyitye, sondle abantwana bethu nazo zonke iimfuno zethu ezisisiseko.
Ngoko, ngokwahlukileyo koko abantu abaninzi bakucingayo, akuphosakalanga yaye akuyosono ukuthandazela imali. Sinokuthandazela ubutyebi kunye nenkqubela phambili ngaphandle kwengxaki, kuba namhlanje ibalulekile!
Ukuba ujonge eminye imithandazo yokwenza imali okanye nokuba sisityebi, sinawo awona anamandla kwaye aziwayo kwangoko.
1) Umthandazo weentsuku ezisi-7 zempumelelo
Owona mthandazo udumileyo wokufumana imali kunye nobutyebi ngumthandazo weentsuku ezisi-7. Ngumthandazo obhekiswa kuSaint Cyprian owathi kufuneka kuthandazwe iintsuku ezisi-7 zilandelelana.
Ngeli xesha lexesha siya kukwazi ukususa bonke ububi ebomini bethu, lonke ishwa elibi, imimoya engqongqo kunye nayo yonke into ethintela ukuba sifumane imali.
Iya kuvula iindlela zakho zemali kwaye itsale amathuba amaninzi okufumana imali. Ke, ngumthandazo ongenako ukuwuphoswa kuba unamandla ngenene!
Ngamandla e-Saint Cyprian kunye nabo bonke oomoya abandivayo, ndikucela ukuba umamele kwaye uphendule esi sicelo sam singxamisekileyo kwaye nanamhlanje!
Ndithandazela iintsuku ezisi-7 kuba le nombolo izondinceda, indiphathele amathamsanqa kwaye yenze isicelo sam sibe yinyaniso!
Ngamandla e-Saint Cyprian ndicela ukuba ubomi bam buzaliswe ngamathuba okufumana imali eninzi, ndibe nobutyebi kunye nokuphumelela kwangoko!
Ndincede, ngcwele wam, ukuba ndibe nemali eninzi yokuchitha, ndikwazi ukonga kwaye ndingaze ndiphinde ndiswele imali.
Yenza amathuba avele phambi kwam kwaye ndiyawabona kwaye ndiwenze kakuhle.
Ndikhokele kwiindlela zemali eNgcwele uCyprian, ndibonise indlela yobutyebi, ithamsanqa kunye nempumelelo endingekakwazi ukuyikhokela!
Ndigcine kude nentlupheko, amatyala, ukungoneliseki kwemali kunye nazo zonke izinto ezimbi.
Ngenelela ebomini bam, faka imali epokothweni nakwi-wallet yam ngokukhawuleza. Ndiyakucela ukuba undincede ndingcwele, kuba ndithembele kuwe kunye namandla akho onke.
Makube njalo, amen.
MysticBr umthandazo wokuqala. Ukukopa akuvumelekanga, ngaphandle kwefonti.
2) Umthandazo wokuchuma kunye nobutyebi bezemali iintsuku ezingama-21
Ukufumana ubutyebi akwenzeki ngobusuku, ngoko sihlala sicebisa ukuba abantu bazame ukuthandaza ixesha elide. Kule meko, iintsuku ezingama-21 ziya kusebenza ngakumbi kuneentsuku ezi-7 kuphela.
Kuba sinomthandazo owahluke kancinane. Ngaba ingaphaya umiselwe iNkosi yethu kwaye, ngokuchasene noko ucinga, akusosono ukuthandaza.
Siza kucela uncedo lokuba nemali eninzi ebomini bethu kwaye siphumelele. Le mali ibalulekile ukuze siphile kwaye sonwabe, ke thandaza umthandazo weentsuku ezingama-21 ngaphandle koloyiko.
“Owu! Mdali wehlabathi, wena owathi: Cela kwaye uya kwamkela, nangona ndiphezulu, eBuzukweni bakho bobuThixo, thobela iindlebe zakho kwesi sidalwa sithobekileyo ukwanelisa umnqweno wam.
Yiva umthandazo wam. Owu! Bawo oyintanda, kwaye ndinike ukuba ngentando yakho ndifumane ubabalo endilunqwenelayo (isicelo). Thixo, ndinike zonke iintswelo zam ngoku, ngokobutyebi bakho eBuqaqawulini, kwaye ndiya kuhlala ndinombulelo ngobutyebi bakho obuhlala busebenza, obukhoyo, obungaguqukiyo kunye nobuninzi ebomini bam kwaye oku makwenziwe ngamandla nangegama loNyana wakho oMkhonzileyo. UYesu.
UYehova ngumalusi wam, andiyi kuswela nto. Undibuthisa emakriweni aluhlaza, undithundezela emanzini okuphumla. Uyawupholisa umphefumlo wam; Ndikhaphe ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela.
Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, Ùyithambisa ngeoli intloko yam, indebe yam iyaphalala. Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba yonke imihla yobomi bam; kwaye ndiya kuhlala endlwini kaYehova imihla emide.
3) Umthandazo wokuchuma kwezezimali ngokukhawuleza kwiintsuku ze-30
Sasinabafundi abasicela ukuba senze imithandazo embalwa ngakumbi ukuze sibancede kubomi babo bezemali. Sikhumbula oku, sagqiba ekubeni sibandakanye a kwabo banelishwa kakhulu Ukwenza imali.
Ngumthandazo wempumelelo kunye nobutyebi ekufuneka kuthandazwe kangangeentsuku ezingama-30 ngqo, ngaphandle kokusilela, kabini ngemini. Ngokuqhelekileyo, sincoma ukuba uthandaze xa uvuka kwaye xa ulala.
Ungakhanyisa ikhandlela elimhlophe ngelixa uthandaza, oku kuya kuzisa ukukhanya ngakumbi kunye nethamsanqa kuzo zonke izicelo zakho.
Saint Onofre, wena ulaziyo ixabiso lemali kubomi babantu, ndincede kulo mba, wenze ubutyebi bam bukhule kwaye intlupheko yam iphele.
Ndincede ndivule iindlela zam zemali kwaye ndikwazi ukubona onke amathuba ubomi obundinika wona.
Ndincede ndifumane ngaphezulu, ndonge ngaphezulu kwaye uqiniseke ukuba imali yam ayinciphi ngobusuku.
Yenza amathuba abonakale phambi kwam kwaye indenza ndiphumelele kubomi bam bezemali, emsebenzini nakubomi bam bonke bomsebenzi.
Saint Onofre, ndincede ndiphumelele, ndikwazi ukuhlawula onke amatyala kwaye ndiphume kuzo zonke iimeko zokuphelelwa lithemba kwezemali.
Ndibonise indlela yobutyebi, ndibonise indlela eya kwithamsanqa nako konke ukuchuma endingekakuboni!
Zisa ubutyebi ebomini bam, intabalala kunye nako konke ukuphumelela onokukufumana.
4) Umthandazo wethamsanqa kunye nokuvula iindlela zemali
Okokugqibela, sinomthandazo wokugqibela ojolise ekuvuleni iindlela zethu emalini, emisebenzini nakumathuba avela phambi kwethu.
Isenokubonakala ilula, kodwa ndikholelwe ukuba yenza wonke umahluko ebomini bakho. Ungayithandaza kunye neminye imithandazo ekweli nqaku, njengoko ineenjongo ezahlukileyo kancinane.
Ngoko, ngaphandle kokuqhubeka, qalisa ukuthandaza ngoku, unokholo oluninzi entliziyweni yakho!
Othandekayo Oyingcwele ka-Onofre, wena owahamba ecaleni kukaKrestu, wena wema ecaleni kukaKrestu, ndilinde njengoko wawujongile.
Wena owafunyanwa nguYesu Kristu kwaye wakwenza izicelo ezintathu kuphela:
Imali epokothweni yam,
isonka somlomo wam;
iimpahla zomzimba wam.
Nam ke ndiyanibongoza, nam ndinibongoza, kwanjengoko nifuna ngako nam, kwanjengoko nani nifuna ngako.
Ndiyakucela ngcwele wam, ndinike imali yepokotho yam, isonka somlomo wam nempahla yomzimba wam. (phinda 3 amaxesha)
Ndiyakubuza wena ngcwele wam othandekayo:
(faka iodolo ekhethekileyo apha)
Ekupheleni kwalo mthandazo kufuneka uthandaze 3 Bawo wethu, 3 Bulisa uMariya kunye 1 Uzuko malube kuBawo.
5) Novena ukuba ungaphelelwa yimali
Ngaba ukhe wazama ngaphezu komthandazo omnye wempumelelo kunye nobutyebi bemali kwaye ayisebenzi? Emva koko kufuneka ukhethe ezinye iindlela, ezifana ne-novena.
I-Novenas yimithandazo enamandla eyenziwa kwiingcwele ezithile. iintsuku ezili-9 ngqo. Ke ngoko, kuya kufuneka uthandaze i-novena engezantsi kube kanye ngemini kangangeentsuku ezisithoba.
Unokwenza umnqweno phakathi kwawo, ucele imali, ubutyebi kunye nokuchuma ebomini bakho. Thandaza nangaliphi na ixesha lemini, nokuba lixesha okanye indawo.
Zama umthandazo ukuze uphumelele ebomini kwaye ube nemali
Umthunzi umthandazo oya eSaint Cyprian ukuba atyebise
Imali inokuthatha ixesha ukuba ibonakale ebomini bethu, kodwa kufuneka sihlale sinokholo oluninzi lokuba iya kwenzeka. Yiyo loo nto kufuneka uhlale ukholelwa kumandla omthandazo onamandla wokuchuma okungxamisekileyo kwezemali.
Kusenokuthatha ixesha ukusebenza, kodwa inyaniso kukuba ibisoloko isizisela iziphumo kancinci kancinci. Ngoko yiba nokholo, ngoko yonke into iya kulunga!
1 1) Umthandazo weentsuku ezisi-7 zempumelelo
2 2) Umthandazo wokuchuma kunye nobutyebi bezemali iintsuku ezingama-21
3 3) Umthandazo wokuchuma kwezezimali ngokukhawuleza kwiintsuku ze-30
4 4) Umthandazo wethamsanqa kunye nokuvula iindlela zemali
5 5) Novena ukuba ungaphelelwa yimali